Mancini oo aan ka cabsi qabin in laga ceyriyo Man City. - Caasimada Online
Home Warar Mancini oo aan ka cabsi qabin in laga ceyriyo Man City.
Mancini oo aan ka cabsi qabin in laga ceyriyo Man City.
Roberto Mancini ayaa sheegay inuusan ka cabsi qabin in shaqadiisa Manchester City laga raacdeeyo ka dib markii uu laba sano oo isku xigta ku fashilmay inuu kooxda usoo saaro Wareega 16ka Uefa Champions League.
Laakiin tababarihii kasoo hojeeday Jose Mourinho ayaa sheegay inuusan heysan laheyn nolol sii dheeraata oo koobka kooxaha Yurub ah sidaas darteed ay kooxdiisa Real Madrid noqotay aanfadii koobkanka suulisay Sky Blue.
City oo sanadkii labaad ee isku xigta koobkaan uga baxday wareega Group-ka ayuusan cabsi ka qabin in shaqadiisa laga raacdeeyo Mancini: “Maka kabsanaayo midaas. Qof walba oo halkaan joogaahi wuu ogyahay inay waxaani kubad cag yihiin.
“Xilli ciyaareedku wuu dheer yahay. Waxaad heysataa Europe League, FA Cup iyo Premier League.
“Hadii aan ku fikirno inaan Champions League ku guuleysan karno ka dib laba sano markaan waan waalanahay.
“Chelsea toban sano ayey isku deyeysay sanadahoodii ugu fiicnaa kuma aysan guuleysay. Waxaan u baahanahay dul qaad, waxaan u baahanahay inaan kor u qaadno kooxdeena.”